Mogadishu Journal » 2019 » June » 30
Mjournal :-Magaalada Muqdisho ayaa goor dhow lagu soo dhaweeyay Madaxweynaha maamulka Galmudug Mudane Axmed Ducaalle Geelle ” Xaaf” Soo dhaweynta Madaxweyne Xaaf ayaa ka waxaa ka qeyb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya. Waxaa uu kulamo kala duwan la yeeshay...
MOGADISHU,(Xinhua) — Somali security forces on Thursday night killed 8 militants in southern Somali, officials said on Friday. According to a spokesman from the Somali security ministry and internal affairs of Jubbaland, the militants were killed in a joint offensive...
In London on Thursday, Dr Juma said foreign entities interested in oil and natural gas are taking advantage of Somalia’s weaknesses, a circumstance she warned could force the region off focus in the fight against terror and sea piracy. The top Kenyan diplomat told a gathering of...
Kooxaha Premier league ee Manchester United, Liverpool iyo Arsenal ayaa ku tartamaya xidiga kooxda Borussia Dortmund ee Jacob Bruun-Larsen kaas oo xili ciyaareedkii la soo dhaafay soo jiitay indhaha kooxaha waa wayn ee Ingiriiska. Sida uu shaaciyay wargayska Daily Mirror, kooxaha...
Laacibka xulka waddanka Masar Maxamed Saalax ayaa la dhaleeceeyay kaddib markii uu soo jeediyay in “fursad kale” la siiyo ciyaartoy ay xulka Masar ka wada tirsan yihiin oo lagu eedeeyay inuu gaystay xadgudub galmo. Xidiggan u dheela kooxda Liverpool oo bishii Abriil u sheegay...
Mjournal :-Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliland ayaa Maanta xayiraadii ka qaaday laba Telefeshin oo dhawaan ay deegaanadaas Maamulkaas laga mamnuucay,kadib markii lagu eedeeyay inay ku dhaqaaqeen falal ka hor imaanaya Qaranimada Soomaaliland sida ay hadalka u dhigeen. Telefshinada...
Mjournal :-Qarax ayaa goor dhaw ka dhacay meel ku dhaw Shirkadda Dahabshiil xarunta ay ku leedahay Suuqa bakaaraha ee magalada muqdisho . Qaraxan ayaa wararka waxa ay sheegayaan in lagu xiray gaari noociisa yahay Hilux oo halkaasi yaalay. Ilaa hada ma cadda gaariga dadka leh...
Mjournal :-Maxkamadda Racfaanka Maamulka Puntland ayaa dil toogasho ah ku ridday saddex Nin oo loo heysto kufsiga iyo dilka Caasho Ilyaan Aadan oo billowgii sanadkan ay ku dileen Gaalkacyo. Maxkamadda Racfaanka ayaa waxaa ay xukunka dilka ku raacday Maxkamadda darajada 1aad ee...
Mjournal :Taliska Booliska Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday in Ciidamada Ammaanka ay gacanta ku dhigeen Shaqsi lagu eedeynayo dilka Suleeqo Yuusuf Axmed oo dhowr cisho ka hor meydkeeda laga helay Hotel Caamir oo ku yaalla agagaarka Isgoyska Baar Ubax ee Magalada Muqdisho....
Mjournal :-Mdaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aya saakay waxa uu xariga ka jaray laba wado oo muhiim ah oo ku yaalla Magalada Muqdisho,kuwaas oo dib u dhis lagu sameeyay. Wadooyinkaan ayaa kala qeybiya degmooyinka Cabdul Casiis iyo...
Mjournal :-Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa saaka ka qeyb galay Salaadda Janaasadda Meydka Allaha u naxariistee Maxamed Qanyare Afrax oo lagula dukaday Masaajidka Shuhadaa ee Madaxtooyada. Madaxweynaha iyo masuuliyiinta Marxuumka ku...
Mjournal :-Maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal ayaa xukun dil ah ku ridday saddex nin oo ku eedaysan kiiskii Caasho Ilyaas Aadan oo ahayd inan yar oo lagu kufsaday laguna dilay magaalada Galkacyo. Maxkamadda racfaanka ayaa ku raacday go’aankii ay horay maxkamadda darada...